२०७७ फाल्गुण ८ शनिबार १३:५६:००
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका ५ मा निर्माण भएको भीमसेनथान मन्दिरको उद्घाटन गर्दै उनले चुनावका लागि तयार हुन आग्रहसमेत गरे ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘चुनावमा जनताले सही व्यक्तिलाई पुरस्कृत र गलतलाई दण्डित गर्नेछन् । जनताभन्दा ठूलो न्यायाधीश अरू कोही हुँदैनन् । यसैले ताजा जनादेशका लागि सबै तयार हुनुपर्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय जनसहभागितामा भीमसेनथान मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिएको हो । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का प्रदेश सांसद नारायण सिलवालले मन्दिर पुनर्निर्माणमा पहल गरेका थिए ।
सो अवसरमा उनले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न सफल भएकाेमा खुसी व्यक्त गर्दै हाँडीगाउँवासीको सहयोगकै कारण योजना सफल भएको बताए । स्थानीयको करिब रु. १६ लाख सहयोग उपलब्ध भएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्रका सबैखाले विकास निर्माणकाे कामका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । संस्कृति र सम्पदा बचाउनका लागि महानगरले धेरै काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
#उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल # निर्वाचन
आज पत्रकार महासंघको निर्वाचन : १३ हजार एक सय २२ सदस्यले मतदान गर्दै
पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रदेश २ बाट ५३ जनाको उम्मेदवारी
सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय उद्घाटन